फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - हास्यव्यङ्ग्यको नम्बरी सुन गोतामे
हास्यव्यङ्ग्यको नम्बरी सुन गोतामे माणिकरत्न शाक्य
वि.सं. २०४९ सालमा हास्यव्यङ्ग्यमा एउटा पत्रिका जन्मियो– झ्याईंकुटी । पत्रिका प्रकाशन गर्ने क्रममा यससग सम्वद्ध कसैसँग चिनजान र सम्पर्क थिएन । झ्याईंकटीको पहिलो अंक जसोतसो गरी निकालियो र बजारमा छरियो । यसै सिलसिलामा झ्याईंकुटीको दोस्रो अङ्क गाईजात्रा विशेषाङ्क थियो । त्यही बेला हासनेले गाईजात्रा पत्रिका विशेषाङ्कलाई पुरस्कृत गर्न घोषणा अनुसार झ्यार्इंकुटीले तृतीय स्थान उछिट्याउन सफल भयो । क्रमश छैठौं अङ्कसम्म पुग्ने बेलामा फेरि हास्यव्यङ्ग्यमा राम्रो काम गरे वापत भैरब पुरस्कार गुठीलो झ्याईंकुटी पत्रिका भैरब नवप्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने मौका पायो । सो गुठीले प्रत्येक वर्ष भैरब प्रतिभा र भैरब नवप्रतिभा पुरस्कार एकै चोटी दिने गरेको छ । सो अनुसार वि.सं. २०४९ मङ्सिर ८ गते शुक्रबारका दिन सो पुरस्कार वितरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
निम्तोपत्रमा लेखिए बमोजिमको कार्यक्रम थियो ने.रा. बैंको थापाथली स्थित वैंकर्स क्लबको भवनमा । त्यस दिन उद्घोषकले कार्यक्रम शुरु भएको जानकारी दिंदै सभापति रमेश विकल, प्रमुख अतिथि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, वक्ताहरू र पुरस्कृत व्यक्तित्व श्याम गोतामे र झ्याईकुटी पत्रिकाका प्रतिनिधिको रूपमा सम्पादक माणिकरत्न शाक्य सभाका अग्रपङ्क्तिमा थियौं । रोलक्रम अनुसार बस्ने क्रममा श्याम गोतामे र म सँगै प¥यौँ ।
सभापतिबाट कार्यक्रम शुरु गर्न अनुमति दिएपछि उद्घोषकले वक्ताहरूलाई बोलाउने क्रम जारी थियो । श्याम गोतामे हास्यव्यङ्ग्यका गुरु र वैंक स्टाफ, (त्यो बेला रा.वा. वैंक टेकु शाखामा कार्यरत) भएको नाताले पत्रिकालाई रचना दिएर सहयोग गरिदिनु प¥यो भनेर कानेखुसी गरेँ । उहाँले ‘भैहाल्छ नि’ भन्नु भएपछि मेरो परिचय मागियो मैले छोटकरीमा सबै बताएँ । पुन उहाँले भन्नुभयो ‘हामी त एउटा थलोमा पकाएको भात खाने पो परेछौं ।’ त्यही बेलामा उहाँको बोल्ने पालो आयो र बोल्नु भयो उहाँले दायाबायाँ कतै नहेरी नेपाली साहित्यमा बढ्दै गएको विसङ्गतिमाथि व्यङ्ग्य कस्दै खरो स्वभावमा आफ्नो विचार पोख्नुभयो । सो कार्यक्रममा बोल्नु भएको कुराको टिपोट जनमञ्च पत्रिकामा प्रकाशित छ । त्यो बेला उक्त पत्रिकामा ‘सोझो घुमाउरो’ स्तम्भमा लेख्नु हुन्थ्यो श्याम गोतामे । मलाई लाग्यो– हास्यव्यङ्ग्यमा लाग्ने मान्छे त यस्तो पो हुनुपर्छ । उहाँसँग पहिलो पल्ट प्रत्यक्ष भेटघाट सहित परिचय पाउन म सफल भएँ । तर रचना भने कहिल्यै पाइन उहाँबाट ।
श्याम गोतामेले नेपाली साहित्यकारको परिचय कोश (तयारी क्रममा) हस्तलिखित कागजपत्र, चक्कामा भरिएको धेरै साहित्यकारका स्वर लगायत सम्पूर्ण सामग्रीहरू मलेखुमा अचानक आएको बाढीले सबै कुरा बगायो । त्यस बेला उहाँको होटल मलेखुमा थियो । उहाँ भने पौडी खेल्न जान्ने भएकाले मात्र बच्नु भएको थियो । मलेखुबाट लगत्तै उहाँ काठमाडौँ आउनु भयो । त्यो बेला नाटककार अशेष मल्लले गोतामेसँग भेट्नु भएको रहेछ सो कुरा उहाँसँग भेटघाट हुँदा सुनेको हुँ । हासनेद्वारा आयोजना गरिएको प्रत्येक कार्यक्रममा उहाँ कि त अघिल्लो मेचमा बस्नुहुन्थ्यो, कि त पुछारमा । उहाँले जिन्दगीभर हास्यव्यङ्ग्य निबन्धमै मात्र समर्पित भएर लेख्नु भयो । अन्तिम अवस्थासम्म उहाँका फुटकर रचना सहित जदौ,, मपाई, श्याम गोतामेका प्रतिनिधि हास्यव्यङ्ग्य कृतिको रूपमा पाठक समक्ष राखिसक्नु भएको छ । आफ्ना निबन्ध मार्फत ।
गोतामेको एउटा बानी यस्तो छ कुनै एक कवि मञ्चमा पुगेर म हास्यव्यङ्ग्य कवि त होइन तैपनि एउटा रचना तपाईंहरूलाई सुनाउँछु भन्यो भने दर्शक दीर्घाबाट श्याम गोतामे कुलिंनु हुन्थ्यो ‘तेरिमा झ्याक्ने ! हास्यव्यङ्ग्य कविता लेख्न आउँदैन भने मञ्चमा किन गइस् त ?’ अन्य दर्शकहरू गललल हाँस्छन् । कवि खत्तम खलास । एकचोटी हासनेले दुईदिने कविता महोत्सव टिकटमा कविता वाचनको कार्यक्रम रसियन कल्चर सेन्टर कमलपोखरीमा गरेको थियो । हासनेका पदाधिकारी सहित हामी हास्यव्यङ्ग्यमा समर्पितहरू मिलेर यो कार्यक्रम आयोजना गरियो । टिकट बनाउने जिम्मा अर्जनु पराजुलीको थाप्लोमा प¥यो । सम्पूर्ण कार्य तयारी भएपछि सबैले टिकटको प्याड बोके । मैले ५ प्याड विक्री गरेँ । टिकट बेच्नका लागि दौडधूप गर्दा ज्वरोले लडायो पनि । साथीभाइहरूको बीचमा हासनेका महासचिवले प्रेसमा गई अर्काे रङ्गको टिकट छापी बेचेको कुरा गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । सो कारा श्याम दाइको कानमा पनि परेछ । श्याम दाइ कार्यक्रमको पहिलो दिन ढोकामा टिकट जाँच्नेमा बस्नु भएछ । विना टिकटको मान्छे हलभित्र छिर्न नपाएपछि त्यहाँ उपस्थितहरू एक अर्का बीच मुखमुख गर्न थाले । श्याम दाइको त्यो कामले बेइमानी हच्केर वा कुनै कारणले हो भिन्न खाले टिकट भने भेटिएन । पहिलो दिनको कार्यक्रममा आफू ज्वरोले थलिएर घरमै बस्नु परे पनि मन भने कार्यक्रम स्थलतिरै थियो । दौस्रो दिनको कार्यक्रमको लागि टेम्पो चढेर म त्यहाँ पुगे । म त्यहाँ पुगेपछि श्याम दाइले ढोकामा टिकट हेर्न जिम्मा दिनुभयो र साथमा श्यामदाइ पनि । जुन अड्कल काटिएको टिकट भेटेको भए के गर्नुहुन्थ्यो त्यसको उत्तर उहाँसँग मात्र थियो । त्यस्तो दुर्घटना हुन भने पाएन । कार्यक्रम सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा हुँदा काममा सघाउने र कविता पाठ गर्न मञ्चमा नजाने मध्येबाट म र श्यामदाइ मात्र प¥यौं । श्याम दाइबाट मेरो कामको बढी मूल्याङ्कन भएको कुरा साथी भाइहरूको मुखबाट सुनेँ । सो कार्यक्रमबाट रु. ३००। मेरो भागमा परेको सुनेँ तर हातमा परेन । एकदिन अप्ठ्यारोमा परेको बेला रु १५० पाएँ तर बाँकी कुन दिन पाउने हो थाहै छैन ।
मैले वि.सं. २०५० सालमा हास्य कलाकार तथा लेखक गोपालराज मैनालीका बारेमा उहाद्वारा लिखित रचनाहरूको २।५ वर्ष खोज गरेको थिए । सो सामग्री विभिन्न पत्रपत्रिकाबाट उतार्दै कम्प्इुटर गरियो । आफूलाई शुद्धाशुद्धीको त्यति राम्रो ज्ञान थिएन, यस काममा निकै चर्चित हुनुहुन्थ्यो श्याम गोतामे । उहाँलाई अनुरोध गरे, प्रति पेजको रु १० लिने शर्तमा डमी बुझाए । एक हप्तापछि उहााले मलाई फmोन गर्दै सामग्री तयार भयो रु. १०००। बोककेर आउनु भन्नपे आदेश मुताविक २।३ दिनपछि भेट्छु भन्ने सल्लाह गरे । सल्लाह बमोजिम नगद टक्रयाए सामग्र ल्याए । बाटो परेको बेला या कामले गर्दा उहाँ शुद्धाशुद्धीमै तल्लीन हुनुहुन्थ्यो । चिया खाने हो भनेर सोध्नु हुन्थ्यो स्वीकृति दिएपछि चिया आउँछ उहाँ र मलाई । उहाँले जहिल्यै पनि चियामा १ गोली औषधी राख्नुहुन्थ्यो अनि मात्र पिउनु हुनथ्यो । उहाँले हेर्नु भएको शुद्धाशुद्धीमा पटकै पिच्छे दोष लगाएर पठाउनु हुने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । कृष्णप्रसाद पराजुली । कुरा के परेछ भने पराजुली माड्सापको बुढ्यौली पाराको हेराइ हुन्थ्यो भने श्याम दाइको नयाँ । यी दुई व्यक्तित्वहरूको चेपुवामा परेर धेरै नै हैरानी खेपेको छु मैले ।
वि.सं. २०५३ सालको बासुदेवल विद्यादेव लुइँटेल पुरस्कार गुठीले आयोजना गरिएको पुरस्कार समारोहको दिन थिो भदौ २३ गते । निर्धारित कार्यक्रम शुरु हुनु भन्दा १ द्दण्टा पहिले श्याम दाइ र म राष्ट्रिय सभा गृहमा पुगेका थियौं । त्यही बेलामा हास्यव्यङ्ग्यकार बासुदेव लुइँटेलकी नातिनी मीनि शर्मा (वर्ष ५को) राष्ट्रिय सभा गृहभित्र रहेको पोखरीमा अचानक खसेपछि अन्य बच्चाहरू चिच्याउन लागे । यसो हेरेका त पौडी खेल्न लाग्या होला भन्ठानेको त बच्चा पोखरीमा तल जाने र माथि आउने हुँदै पानी खान थालेपछ भने श्यामलाई झ्वाम्लाङ्ग पापेखरीमा हाम फाल्नु भयो र बच्चा तान्दै ल्याउनु भयो । हामीद्वय सोही पोखरीको छोउमा बसेर विविध कुरा गहिरिएका थियौं । पोखरी नकिै गहिरो भएको र यसरी बच्चा बचाउन सकिएकोमा उहा भने निकै खुशी हुनुभयो । बच्चाका आफन्तहरू आत्तिन थगाले । श्यामदाइले बच्चाले पानी खाएको छ उत्ताना पारेर पछाडीबाट हिर्काउनु उहाँले भने जस्तो गरेपछि बच्चाले पानी आकल्यो केही मात्रामा जयराम शर्मालाई सो घटनाको याथस्थिति बताएपछि उहाँको कार्यालयको मोटर त्यहाँ ल्याइएको रहेछ । श्यामदाइ र म मोटरमा बसेर श्यामदाइको घर न्यूरोड पुग्यो । उहााले बोक्ने गरेको व्याग घर पुग्ने वित्तिकै फाल्नु भयो । श्रीमतिलाई लुगा ल्याउन अअहराउनुभयो । लुगा लगाइसकेर व्यागको खोजी गरियो तर फेला पार्न सकिएन । त्यपछि पुनः मोटरबाट उही ठाउँमा आयौं । हामी त्यहाा आउँदा कार्यक्रम शुरु भैसकेको थियो । ब्यागभित्र महत्वपूर्ण कागजपत्र, औषधी सहित रु ५००। मैले हराए भन्नु भयो मात्र । त्यसको केही दिनपछि उक्त व्यागको बारेम ाफोन गरेर सोध्दा घरमै कुनामा भेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
वि.सं. २०५३।१२।१३ गतेका दिन हासनेको कार्यक्रम थियो । उक्त दिनमा मैले हास्यव्यङ्ग्यकार नालीबेलीको फर्म दिएपछि दुइ तिन दिनमा सम्पर्क राख्न भन्नुभयो । १ महिनापछि सम्पर्क राख्दा तयार पारेर राखी दिनु भएको थियो । उहाँबाट त्यही फर्ममा लिखित हस्तलिखित नै पहिलो र अन्तिम थियो ।
वि.सं. २०५५ बैशाख १९ गतेका दिन विहान एउटा फाने आयो, जसमा स्वर थिगो धर्मराज बरालको । खवर नराम्रो छ श्याम दाइ वित्नु भयो । हस्पिटलबाट पशुपति पु¥याइसकेको छ भन्ने खबर पाएर फोन राखे । म सो खवर सुन्ने वित्तिकै पशुपति पुग्दा उहाँको श्रीमति, अन्य दुइचार जना मात्र थिए मैले नचिनेको मान्छे । त्यहाँ एकछिन अलमलिदै गर्दा उमेश गुइठे –पशुपतिमा घर भएको हास्यव्यङ्ग्यकार) को याद आये । त्यपछि त्यहाँबाट गुइठेको घर पुगे, आउनुको कारण श्याम दाइ वित्नुभो । फोटो खिच्न क्यामेरा छ भनेर सोध्दा छैन भन्ने जवाफ पाएपछि यस कामका लाग सहोग मागे । उसले व्यापारिक तरीकाले फोटो खिचेर हिंड्ने मित्रहरूकह पुगदा कोही विरामी भएर थला परेको, कोही बाहिर गएको कारणले भेट हुन सकेन । त्यसपछि हामीद्वय निराश भएर पनु पहिलेको ठाउँमा फर्कियौं । त्यहाँ एकपछि अर्काै गर्दै भेला हुने क्रम बढ्दै गयो । भेलामा सामेल भएका मध्येबाट श्यामदाइ सम्बन्धि संस्मरणहरू बाढीको भेल भएर निस्कन थाल्योृ । सामग्री तयार भएपछि श्श्याम दाइको शरिर माथी पशुपतीमा रहेका गोतामे परिवारले पूजाआजा गरि भगवानको नाम दिंदै आफ्नो परमपरा अनुसारको विधि पुरयाइसकेपछि सबे मिलेर मृत शरिरलाई चितामा राखियो । चितामा राखेर विधि विधानको काम सकेपछि उहाँको जेठा छोराबाट ठकि ९ बजे दाग बत्ती दिइयो ।
श्याम दाइ वितेको कुरा एक कान दोकान मैदान हुँदै फैलियो । त्यसपछि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि ठूलो समूहमा साहित्यकार लगायत गन्यमानन्य व्यक्तिहरूको भीड लागेको थियो । त्यही समूमध्येबाट साहित्यकार सुवसेन श्याम दाइको समवेदनान समाचार पत्रपत्रिकामा दिन फोटो खोजियो, कसैसँग पनि रहेनछ । मसँग हास्यव्यङ्ग्यकार नालीबेलीको लागि लिइएको २ प्रति पासपोट साइजको फोटा र उहाँद्वारा लिखित फर्म छ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधें । हुन्छ भन्ने जवाफ पाएपछि सुवसेन, पीताम्बर ध्वज खाती, वकिल मित्र र म सहित चारजना चावहिल कुटुवहालमा आयांै । मसँग रहेके ाफोटो र फर्म फोटपोकपी गरेर उहाँहरूलाई जिम्म लगाएपछि अतिथिलाई चिया खुवाएर सत्कार गरे ।
सोही दिन १२ बजे भुँडीपुराण कार्यालय बागबजारमा सिस्नुपानी नेपालको विधिवत् रूपमा संस्था गठन गरियो । सोही अवसर पारी श्याम दाइ वित्नु भएको खवर सहित १ मिनेट मौनधारण गर्नका लागि मैले प्रसताव राखें । प्रस्तावको स्वीकृतिपछि १ मिनेट मौनधारण गरियो ।
वि.सं. २०५५।१।२५ गतेका दिन साप्ताहिक विमर्शमा श्याम दाइको बारेको संस्मरण प्रकाशित थियो । त्यही संस्मरणमा साच्चिकै श्याम दाइको श्रद्धाञ्जली गर्ने हो भने उहाँद्वारा लिखित हास्यव्यङ्ग्यका कृति पढ्नु भयो भने मात्र साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ । उहाँको कृति प्रत्येक व्यक्तिको हातमा पारिदिने पत्रिकामा जुन कसम खाएको थिए, प्रत्येक व्यक्तिलाई गुहारेर आफ्नोे कार्य पूरा गरे ।
शयाम दाइ वित्नु भएको १५ दिन पछि हासनेले कृषि विकास वैंकको सभाकक्षमा शोकसभा आयोजना गरियो । त्यही क्रममा श्यामदाइको छोराले आफ्ना बुवाको संस्मरणहरू हस्यौली पारामा सुनाउनु भयो । उहाँ घरका सदस्यहरू कसैलाई बाँकी राख्नु हुन्नथ्यो जसरी व्यङ्ग्य लेख्दा एक महिना पछि श्रीमतीसँग भेट्दा खेरीको संस्मरण । श्याम दाइका अचानक निधनले श्रीमतिको मन मतिष्कमा भने नराम्रोसँग प्रभाव पारेको थियो ।
एकजना हास्यव्यङ्ग्यका हस्ती, खरो स्वभाव, छुच्चो बोलीका धनी श्याम गोतामेको निधनले हास्यव्यङ्ग्यमा पर्न गएको एउटा अपुरणीय क्षति थियो । जरी नम्बरी सुनलाई कसीमा राखेर जति घोटेपनि त्यो नम्बरी नै हुन्छ तयसरी नै हास्यव्यङ्ग्य लेखनमा एउटा नम्बरी सुन नै थिए – श्याम गोतामे । एउटा चमक, सुन्दरता भन्ने वस्तु आफैमा अर्थात् जन्मजात लिएर आएको गुण हो त्यो कसैले मेट्न खोजेर मेटिदैन । सत्य कहिल्यै डग्दैन भने झैं उहाँले कहिल्यै कसैको सामु झुक्नु भएन । राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागी जीवनभर संघर्षशील व्यक्तित्वको नाउँ हो– श्याम गोतामे । म उहाँको निधनले एउटा सच्चा दाइ, एउटा हितैषी स्टाफ गुमाउनु पर्दा जसरी भित्रैदेखि एकदमै अप्ठ्यारो पैदा भएको छ, के के भए जस्तो के के हराए जस्तो भएको छ । त्यसैले जे जस्तो भएतापनि मान्छेको जुनी न हो सबले एकदिन छोड्नैपर्छ यो धर्ती । मन लागेर होस् या नलागेर ! समय वलमान हुन्छ, समलाई जित्न कोही सक्दैन । त्यसैले श्याम दाइसँग विछोडिनु पर्दाको पीडा, दुःख, असजिलो पनलाई पनि कठोरता भित्र लगेर बलजफ्ती बोल्नु परेको छ – श्रद्धाञ्जली ।